Aluminum Mobile Capsule, Mobile Capsule, akpa House, ịkpakọba House - AMC
Product Atụmatụ & Uru
Na afọ 2000
The ụwa mbụ aluminum akpa ụlọ e bipụtara
A nkukota n'etiti arụmọrụ aesthetics na aluminum amalite
Mgbe 10 ọzọ afọ
Wuru ụwa mbụ niile-aluminum foldable ụlọ China
Changzhou Aluminium Mobile Capsule emi odude ke "mba green ụlọ" emi odude ke Changzhou, naanị 1 hour ụgbọ okporo ígwè na Shanghai. Anyị bụ ndị ụwa nanị aluminum ịkpakọba ụlọ nchoputa. The ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ aluminum alloy ịkpakọba ụlọ mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ.
The ngwaahịa integrates na mfe, mfe n'ogige atụrụ, ibughari imewe echiche, ji ka nnyocha & mmepe na mmepụta nke ọhụrụ mara obibi, mberede ụlọ, odida obodo ụlọ, na ọ dịghị onye na ụlọ ahịa na na. Ọtụtụ-eji enyemaka, agha mara ụlọikwuu, ewu na saịtị, ọha azụmahịa, njem ezumike, m mara ụlọikwuu, ọchịchị nwa oge ụlọ, nnukwu-ọnụ ọgụgụ ihe na nile di iche iche nke azụmahịa na-eme otú ahụ dị ka nwa oge ụlọ obi.
AMC nọgidere ketara omenkà mmụọ, ọgụgụ isi na-ewu na obi, na-achọpụta na ịma mma nke aluminum njem ...